၂၀၂၀၊ ၁၂.၁၂ ကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်အတွက် လျှော့စျေးကူပွန်တွေကိုရယူဖို့အတွက် ဘယ်နည်းလမ်းတွေကအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်မလဲ? - Shop
၂၀၂၀၊ ၁၂.၁၂ ကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်အတွက် လျှော့စျေးကူပွန်တွေကိုရယူဖို့အတွက် ဘယ်နည်းလမ်းတွေကအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်မလဲ?0718
လာမည့် 12-12 sale 2020 ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်မှာဆိုရင် ၉.၉၊၁၀.၁၀ စျေးရောင်းပွဲတွေကလိုပဲ လျှော့စျေးကူပွန်တွေရရှိနိုင်မည့် အစီအစဉ်ကောင်းများစွာပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် များသောအားဖြင့် ကတော့ လျှော့စျေးကူပွန်တွေရှိတာသိပေမယ့် ဘယ်လိုရယူရမလဲ ဆိုတာမသိလိုက်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးအတွက်လျှော့စျေးကူပွန်တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရှိနိုင်မည့်နည်းလမ်းတွေကိုဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်…
Shop.com.mm ရဲ့ Facebook Page ကို Follow လုပ်ထားခြင်း
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ၂၀၂၀၊၁၁.၁၁ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်မှာပါဝင်တဲ့ အစီအစဉ်တွေ လျှော့စျေးကူပွန်တွေအကြောင်းသိဖို့အတွက် Shop.com,mm ရဲ့ Facebook page ကို Like&Follow လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Shop MM မှ ၁၁.၁၁ စျေးရောင်းပွဲတော်နဲ့ပတ်သတ်ပြီးတင်သမျှအကြောင်းအရာတွေကိုမြန်မြန်သိရှိနိုင်မှာပါ။
Shop MM App ကို Download ပြုလုပ်ထားခြင်း
၁၁.၁၁ စျေးရောင်းပွဲတော်ရက်နီးလာလေ Shop MM App မှ In app notification မှာ စျေးရောင်းပွဲတော်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးကြေငြာချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ရဲ့ In App Home page တွေ၊ အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်တွေ၊ လျှော့စျေးကူပွန်ကုဒ်ရယူပုံတွေကိုလဲ အလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အချို့ကူပွန်ကုဒ်ရယူပုံလေးတွေကလဲ Shop MM App ရှိမှလုပ်ဆောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် – ၉.၉ စျေးရောင်းပွဲတော်မှာဆိုရင် App Visit Challenge တွေကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီး လျှော့စျေးကူပွန်ကုဒ်တွေရယူနိုင်တာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Shop Blog ရှိ ၁၁.၁၁ စာမျက်နှာကိုဖတ်ရှုခြင်း
Shop Blog မှာဆိုရင် တော့ 12.12 page ရှိ ၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်နှင့်ပတ်သတ်တဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပွဲတော်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ လင့်ခ်တွေကိုပါချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ အတွက် မိမိစိတ်ဝင်စားတဲ့ ၁၁.၁၁ စျေးရောင်းပွဲတော်မှအစီအစဉ်တွေကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်လို့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ မိမိသိရှိလိုတဲ့အစီအစဉ်အကြောင်းအရာတွေကိုတစ်ခုချင်းလိုက်ရှာစရာမလိုပဲ အားလုံးကိုတစ်နေရာထဲမှာစုစည်းဖော်ပြထားတဲ့အတွက် အဆင်ပြေတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ လျှော့စျေးကူပွန်တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လျှော့စျေးကူပွန်ရယူပုံတွေ၊ အသုံးပြုပုံတွေကိုလေ့လာနိုင်တဲ့အတွက် ကူပွန်တွေရယူဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များအတိုင်းဆောင်ရွက်ပြီး ၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်အတွက် လျှော့စျေးကူပွန်တွေကို သူများတွေထက်အရင်ရယူအသုံးပြုလိုက်ပါ။
၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီး မှာအလွယ်တကူ ပါဝင်ဖို့အတွက် Shop Appကို Download ပြုလုပ်၍ Register လုပ်ထားဖို့တော့လိုအပ်ပါ လိမ့်မယ်။
Previous Article၂၀၂၀၊ ၁၂.၁၂ ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးဆိုတာဘာလဲ?Next Article၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ စျေးရောင်းပွဲတော်မှာဘာဝယ်ရမလဲမသိဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် စျေးဝယ်လမ်းညွှန်